आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ । ...
मुटु शरीरको यस्तो अंग हो जसलाई स्वस्थ राख्न नसक्दा मानिसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउन पुग्छ थाहा नै हुँदैन । बाहिर स्फुर्त देखिने व्यक्ति पनि मुटु अस्वस्थ ...
लक-डाउनमा 'ब्रेकअप' - मन भुलाउन अपनाउन सकिने केही उपायहरू
प्रेमी प्रेमिकाका लागि ब्रेकअपसँग जुध्न त्यति सजिलो काम होइन । प्रेमको सम्बन्ध जब अचानक खतम हुन्छ त्यतिबेला कसैलाई पनि आफूलाई सम्हाल्न कठिन लाग्छ । खासगरी यस्...
पैसा वचत गर्नु एउटा कला हो यो कला जो कोहीसँग नहुन सक्छ । धेरै मानिसहरूले आफ्नो हातमा पैसा टिक्न नसक्ने भनी आफैंलाई दोषी देखाएका हुन्छन् । यति हातमा पैसा अडिएन भने भविष्यका लागि कुनै प्लान गर्न सकिदैन । यद...
असाधारण मोटोपन भएकी महिलाले शल्यक्रियात्मक विधिबाट जन्माइन् स्वस्थ शिशु
असाधारण मोटोपन भएकी महिलाले नर्भिक अस्पतालमा शल्यक्रियात्मक विधिबाट स्वस्थ शिशु जन्माएकी छिन् । बिहीवार बिहान ११ बजे वरिष्ठ प्रसूति तथा बाँझोपन, टेस्टट्युब बेबी विशेषज्ञ र ल्यापारोस्कोपिक सर्जन डा. न...
सरकारले पहिलोपटक झाडापखाला रोक्नका लागि खोप दिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जन्मदेखि पाँच वर्ष मुनिका बच्चालाई झाडापखाला विरुद्ध ...
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ को कारणले स्थगित ‘राष्ट्रिय भिटामिन ए’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । यही असार २२ र २३ ग...
प्रादेशिक अस्पतालमा शिशु सुसार कार्यक्रम
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुसार परियोजना शुरू भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गोल्डेन कम्युनिटीले नवजात शिशु स्याहारमा गुणस्तर सुधार ल्य...
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ‘रेमडेसिवियर’ प्रयाेग गर्न इयुको अनुमति
युरोपियन युनियन (इय) को एक निकायले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि एन्टी भाइसर औषधि ‘रेमडेसिवियर’ को प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। इय...
हिन्दू धर्ममा वेद, पुराण र ग्रन्थहरूको महत्त्व बताइएको छ । यी ग्रन्थहरूले हामीलाई सही मार्गप्रदर्शन गर्छन् । यी शास्त्रहरूमा दिनदिनै बिहानीपख सूर्यलाई जल चढाउनुपर्न...
बिहान उठेपछि क्रमशः यसो गर्नुभयो भने तपाईंलाई धनलाभ लगायतका फाइदा हुन्छन् । बिहान निद्रा खुल्नेबित्तिकै इष्टदेवताको स्मरण गर्नुपर्छ । अनि हत्केलामा हेरेर...
कोरोना मन्त्र : जहाँ भीड त्यहाँ कोभिड, नो भीड- नो कोभिड– डा. रवीन्द्र पाण्डे
१. कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुँदैन। ८५ % संक्रमितलाई थाहै नपाइ वा सामान्य लक्षण देखिएर आफैँ निको हुन्छ। १० प्रतिशतलाई लक्षण अनुसारको सामान्य उपचारले...
कोरोना संक्रमणले तपाईँकाे फाेक्साेलाई कति हानी पुर्‍याउँछ ?
कोरोना भाइरसकाे संक्रमणपछि निकाे भएकाहरुलाई खतराकाे चेतावनी कायमै रहन्छ। अब याे भनिँदैछ कि अस्पतालमा उपचारपछि निकाे भएर घर फर्किएका केहीका...
रामदेवले ल्याए कोरोनाको औषधि कोरोनिल
भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवले मंगलवार कोरोनाविरुद्धको आयुर्वेदिक औषधि बनाएको दाबी गर्दै कोरोनिल ल्याएका छन् । पतञ्जलि योगपीठका प्रमुख रामद...
हरेक व्यक्तिका केही राम्रा अनि केही नराम्रा बानी हुन्छन् । त्यसैले उसलाई जीवनमा अघि बढ्न वा पछाडि हट्न प्रेरित गर्छ । जीवनमा सफलता पाउनका लागि कठिन परिश्रमक...
बेलायतका वरिष्ठ वैज्ञानिकले भने- क्वारेन्टाइन मापदण्ड ‘बेकार’
बेलायतका एक जना वरिष्ठ वैज्ञानिक प्राध्यापक पीटर पाएटले मुलुकमा क्वारेन्टाइनका लागि अपनाइएको मापदण्ड ‘बिलकुल बेकार’ बताएका छन्। लन्डन स्कूल अफ...
‘आर्ट अफ लिभिङ’ योग आशन फोटो प्रतियोगिता हुने
‘द आर्ट अफ लिभिङ’ नेपालले छैटौँ अन्तराष्ट्रिय योग दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउने भएकाे छ। हरेक वर्षको अप्रिल २१ मा मनाइने अन्तराष्ट्रिय ...